တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းချစ်မင်းသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအား ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်မှုတွေ အကုန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ နီနီခင်ဇော် – Cele Posts
အခုဆိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေရာဒေအနှံအပြားမှာ ပစ်ခတ်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် သေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ရာ ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေရဲ့ သတင်းတွေတက်လာတိုင်း ပြည်သူအားလုံးက မိသားစုနဲ့ထပ်တူ မျက်ရည်ကျကာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းခဲ့ကြတာ အမှန်ပါပဲနော်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကလည်း ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ ခုအခြေအနေတွေကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လို တော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားကြတဲ့ အာဇာနည်တွေ ကိုလည်း အနုပညာရှင်တွေက ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကာ အလှူငွေများ သွားရောက်လှူဒါန်းရင်း အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း နီနီခင်ဇော်က တော်လှန်ရေးမှာကြွေလွင့်သွားတဲ့ ကိုချစ်မင်းသူအားအလှူငွေများလှူဒါန်းရင်း ဇနီးဖြစ်သူအား ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူကာ အစအဆုံးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်း ခုလိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
“မြောက်ဒဂုံက ကျဆုံးသွားတဲ့ ကိုချစ်မင်းသူရဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ဝန်​ဆောင် ဇနီးနဲ့ သမီး​လေးအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က သွား​​ရောက်ကူ​ပေးခဲ့ပါတယ်…. ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆို​တော့ယခု အချိန်က​နေစပြီး ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ​စောင့်​ရှောက်မှု​တွေ (ဆီးစစ် ​သွေးစစ်တာ​နေစ လိုအပ်​သော​အစစအရာရာ) ​မွေးဖွားပြီးသည်အထိ နီနီတို့ သူငယ်ချင်း မတည် ထားတဲ့ ဆန္ဒမွန်အခမဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်သားဖွား​ဆေးခန်းက​နေ တာဝန်ယူ​ပေးသွားပါမယ်ဆိုတဲ့ အ​​​ကြောင်းလည်းအား​ပေးရင်း ညီမ​အားတင်းထားဖို့​ပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကိုချစ်မင်းသူတာဝန်​ကျေခဲ့သလို ကျမတို့ပြည်သူ​တွေလည်း အချင်းချင်း ပြန်ကူညီကြတာမြင်ရလို့ ကျမတို့အား​တွေထပ်ဖြစ်ရပါတယ်လိုက်ခဲ့ပေးတဲ့ Ninians ကိုယ်စားပြု Aye Thiri Khine Julian ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဆိုတဲ့စာလေးပဲဖြစ်ရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
တျောလှနျရေးတိုကျပှဲမှာကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးခဈြမငျးသူရဲ့ဇနီးဖွဈသူအား ကိုယျဝနျနဲ့ပတျသကျပွီး တာဝနျယူစောငျ့ရှောကျမှုတှေ အကုနျလုပျပေးမယျဆိုတဲ့ နီနီခငျဇျော
အခုဆိုလညျး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နရောဒအေနှံအပွားမှာ ပဈခတျမှုတှေ ရှိနတောကွောငျ့ သဆေုံးသူတှမြေားပွားခဲ့ရာ ဒဏျရာရရှိသူတှလေညျး ရှိနခေဲ့ပါတယျ။သဆေုံးသူတှရေဲ့ သတငျးတှတေကျလာတိုငျး ပွညျသူအားလုံးက မိသားစုနဲ့ထပျတူ မကျြရညျကကြာ ကွကှေဲဝမျးနညျးခဲ့ကွတာ အမှနျပါပဲနျော။ကမ်ဘာတဈဝှမျး ကလညျး ဆိုးဝါးလှနျးတဲ့ ခုအခွအေနတှေကေိုစိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နခေဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
အဲ့လို တျောလှနျရေးမှာ ကဆြုံးသှားကွတဲ့ အာဇာနညျတှေ ကိုလညျး အနုပညာရှငျတှကေ ကိုယျတိုငျ သှားရောကျကာ အလှူငှမြေား သှားရောကျလှူဒါနျးရငျး အားပေးနှဈသိမျ့ခဲ့ကွတာလညျးဖွဈပါတယျ။အခုလညျး နီနီခငျဇျောက တျောလှနျရေးမှာကွှလှေငျ့သှားတဲ့ ကိုခဈြမငျးသူအားအလှူငှမြေားလှူဒါနျးရငျး ဇနီးဖွဈသူအား ကိုယျဝနျနဲ့ပတျသကျပွီး တာဝနျယူကာ အစအဆုံးစောငျ့ရှောကျမှုတှပွေုလုပျပေးမယျဖွဈကွောငျး ခုလိုရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
“မွောကျဒဂုံက ကဆြုံးသှားတဲ့ ကိုခဈြမငျးသူရဲ့ ကနျြရဈခဲ့တဲ့ ကိုယျဝနျ​ဆောငျ ဇနီးနဲ့ သမီး​လေးအတှကျ တတျနိုငျတဲ့ ဘကျက သှား​​ရောကျကူ​ပေးခဲ့ပါတယျ…. ကိုယျဝနျနဲ့ဆို​တော့ယခု အခြိနျက​နစေပွီး ကိုယျဝနျနဲ့ပတျသတျတဲ့ ​စောငျ့​ရှောကျမှု​တှေ (ဆီးစဈ ​သှေးစဈတာ​နစေ လိုအပျ​သော​အစစအရာရာ) ​မှေးဖှားပွီးသညျအထိ နီနီတို့ သူငယျခငျြး မတညျ ထားတဲ့ ဆန်ဒမှနျအခမဲ့ ကုသိုလျဖွဈသားဖှား​ဆေးခနျးက​နေ တာဝနျယူ​ပေးသှားပါမယျဆိုတဲ့ အ​​​ကွောငျးလညျးအား​ပေးရငျး ညီမ​အားတငျးထားဖို့​ပွောခှငျ့ရခဲ့ပါတယျကိုခဈြမငျးသူတာဝနျ​ကခြေဲ့သလို ကမြတို့ပွညျသူ​တှလေညျး အခငျြးခငျြး ပွနျကူညီကွတာမွငျရလို့ ကမြတို့အား​တှထေပျဖွဈရပါတယျလိုကျခဲ့ပေးတဲ့ Ninians ကိုယျစားပွု Aye Thiri Khine Julian ​ကြေးဇူးတငျပါတယျ”ဆိုတဲ့စာလေးပဲဖွဈရာ ပရိသတျကွီးအတှကျပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
သူမကိုယ်တိုင်လည်း သားနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်လို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့မိဘတွေ ကိုယ်စားဝမ်းနည်း ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်ဆိုတဲ့ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်